VAKY NY SAMBON-DRAJOELINA – MyDago.com aime Madagascar
VAKY NY SAMBON-DRAJOELINA
Mandrebireby vahoaka amin’ny fifidianana solombavam-bahoaka fotsiny Rajoelina hoy ny Ct Ranaivorazo Fenomanjato androany teny amin’ny Magro Behoririka satria ny tiany ho kendrena dia tsy hahavanona ny fifidianana. Tsy misy tamboho azo hitomaniana any New York hoy izy raha niresaka ny fandehanan’ny Rajoelina any. Efa fantatra ny position ny amerikana raha ny krizy no resahina.Nisy ny tsy nety nataonareo mpanao politika miaradia amin-dRajoelina ireo hoy Feno nefa ianareo milaza fa hanao fanovana. Tsy naharesy lahatra ny vahoaka ny zavatra nataonareo fa mbola mikiribiby ihany. Saribakolin’ny Lafrantsa ianareo hoy ity olomboantendry ity ary anisan’izany ilay olona iray avy any Mozambika. Efa fantatra foana hoy izy ny fanontaniana apetrany isaky ny tonga eto izy. N’inon’inona ataon-dRajoelian dia tsy mahasakana ny tolontsika tsy handresy izany.Momba ny miaramila dia nambarany fa tsy nandray andraikitra ianareo. Raha nandray ny adidinareo ianareo dia tsy nisy ohatra izao teto. Mbola be vava ihany hoy Feno ny jeneraly Ranto fa raha tonga eto ny filoha Ravalomanana Marc dia mety hiady ny mpomba azy sy Rajoelina. Tamin’ny 26 janoary 2009 ireny anefa hoy izy dia iaraha mahalala fa izy ireo no nanao ireny. Fanendrikendrehana ny zanak’I Dada no nisy teto hatramin’izao. Mitetika ny hitazona ny tetezamita ela eo izy dia tsy hisy fifidianana. Noho izany hoy Feno dia aza kivy isika fa tsy maintsy mandresy isika. Ny Ct Rasoamalala Brenda kosa dia nilaza fa vaky ny sambo satria totohondry no nataon’ireo omaly. Efa kely sisa hoy izy dia tsy hita intsony. Nieritreritra Rajoelina fa hanaiky azy Beriziky ny amin’ny fanaovana ny fifidianana solombavam-bahoaka mialoha. Iny no nantenainy ho entina any an-dafy nefa dia tsynisy izany. Ny antsika hoy Brenda dia tafita satria efa manangasanga ny fotoana hahatongavan’I Dada. Efa miomana ho amin’ny fitsenana ny any amin’ny faritra amin’izao fotoana izao. Noho izany dia feno ny kianja eto amin’ny Magro fa rehefa maro isika dia tsy maharaka antsika ireo miaramila ireo. Tsyhitan-dRajoelina hoy izy ny atao satria mikorontana atsy sy aroa. Rehefa tonga ny filoha Ravalomanana Marc dia miala eto izy. Ny zanak’i Dada dia manana olomanga ary isika ireto no afaka hanavotra ny firenena.
NY FITONDRAN-DRAJOELINA NO RATSY INDRINDRA ETO AN-TANY
Auteur Solo Razafy*Publié le 1 février 2013 1 février 2013 Catégories Politique
5 réflexions sur « VAKY NY SAMBON-DRAJOELINA »
1 février 2013 à 16 h 55 min
Malgré toutes les tuiles qui tombent sur rajoelina et ses revingadra ,
pourquoi rajoelina est-il convaincu qu’il peut rester président de la transition donc il va préparer les électons et gérer le financement y affecté..
Mais il est vraiement persuadé qu’il peut empêcher le retour du Président de la République RAVALOMANANA MARC au Pays car la présence du Président e la République est
– d’abord un échec du coup d’état , donc échec personnel de rajoelina , qui a du coup couillonné ratsiraka qui l’ a aidé avec sese directives et son argent pour ce coup d’état,
-ensuite va anéantir ses evigadra de demain
-enfin a des chances d’accélérer les enquêtes , poursuites et jugement de rajoelina et de ses bandes de malfaiteurs , qui sévissent jusqu’à ce jour !
Le plus grave est le fait que des Malgaches le croient sans sourciller !
1 février 2013 à 18 h 47 min
Ka efa tsisy aleha intsony ry yves aimé, vyvato, raharinaivo sy rajemison dia mivovo ohatran’ny alika romotra sisa ! Iza hono ny vahoaka ambadik’ireo ? 0,000000000000001% ô !
Mba asio fe-vozony ireo alika ireo fan’angaha mbola mivovo ihany??
tsy mahalala onona mihintsy tsy mety afa-po nefa efa izao no vokatry ny
tsy FIHEVERANA iray minitra sy ilay FITIAVAM-BOLA .
Ny olona aorinan’izy ireo dia sahaza azy tsara raha TORA-BATO sy VOATABIA mazava ho azy
miampy ny Mpiandry tanana sy ny mpanasa lamba sy ny mpitaiza zaza ary mpanadio trano sy
mpahandro sakafo dia zanany sy ny vadiny avy.
1 février 2013 à 21 h 10 min
Esy êêêê ry mpanao pôlitika malagasy ê !!!!!!!! Mpanao havana raha-misy patsa gaigy !!!
Tsy misy fitiavan-tanindrazana na kely aza ; tsy finiavana hampandroso ny Firenena sy fitsinjovana ny hoavin’ny taranaka malagasy no ao an-doha sy anaovana pôlitika, fa ny famenoana paosy, mba hahatafita ny zanaka nateraka ihany, ary hikarakaràna ny 2e sy 3e …birao !!
Fa ianareo ireo ve mihevitra fa tsy hilanja ny laza-ratsinareo ireo zanakareo ireo ???
Mba tsy tiako ny zanako ho tondron’ny olona molotra hoe, zanakin’ny mpanongam-panjakàna ireny !
Ary mbola ho petahin’ny sasany eny amin’ny arabe mihintsy aza no hiafarany !
Ho an’ilay sola manan’endrika pitibola sa bolidôgy, ary ilay mitovitovy amin’ny goret kely, ialahisany ve dia mihevitra fa hahazo voninahitra amin’izao fihetsik’ialahisany izao ?
Toa izany koa ireo rehetra mpanara-dia azy !!!
2 février 2013 à 4 h 14 min
MARINA IZANY REHETRA IZANY – TSY MAINTSY MIVALY IZAY NATAO E
Précédent Article précédent : RAVELONANOSY MAMITIANA : TSY ILAINA INTSONY SIMAO FA TSY MAHAVAHA OLANA
Suivant Article suivant : Pro Ravalomanana : Fikambanana vaovao ivondronan’ireo tsy anaty « système »